हाम्रो लागि कमल थापा र प्रचण्ड उस्तै हुन्ः धर्मेन्द्र वास्तोला – Nepal Press
‘एमसीसी पारित गर्नेहरूलाई घरबाट थुतेर सडकमा ल्याइ कालोमोसो दल्नेछौं’
२०७८ भदौ २९ गते १९:२२
नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अघिल्लो केपी शर्मा ओलीको सरकारसँग हिसात्मक आन्दोलन त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सम्झौता गर्‍यो । यद्यपि, मूलधारको राजनीतिमा यस पार्टीको उपस्थिति देखिएको छैन ।
विप्लव समूहका नेताहरू अन्य दलका नेताहरूसँग भेटेर विभिन्न मुद्दाहरूमा लविङ गरिरहेका भेटिन्छन् । आफ्ना पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरूको रिहाइ उनीहरूको प्राथमिकतामा छ । पार्टीको मुख्य राजनीतिक एजेन्डा चाहिँ जनमतसंग्रह हो ।
नेकपा विप्लव ले अब कस्तो तरिकाले आफ्नो राजनीतिलाई अघि बढाउँछ भन्ने अस्पष्टताका बीच सो पार्टीले एमसीसीको विरोधमा सडक आन्दोलन शुरू गरेको छ । एमसीसीका विरोध गरिरहेका विभिन्न समूहहरूसँगै विप्लव माओवादी पनि सडकमा ओर्लेको हो । राष्ट्रियतासँग जोडिएको मुद्दालाई हतियार बनाएर यस पार्टीले राजनीतिमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजेको कतिपयले विश्लेषण गरेका छन् ।
यीनै विषयको सेरोफेरोमा हामीले पार्टीका सचिवालय सदस्य समेत रहेका विदेश विभाग प्रमुख धर्मेन्द्र बास्तोलासँग कुराकानी गरेका छौं । उनले एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्दै कुनै हालतमा पारित हुनु नहुने बताए । यदि पारित गरिएमा नेताहरूलाई कालोमोसो दलेर नांगेझार पार्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।
प्रस्तुत छ, बास्तोलासँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमाः
तपाईंहरूले सरकार ढल्नै लागेको बेला केपी ओलीसँग किन सम्झौता गर्न पुग्नुभयो भन्ने प्रश्न पनि छन् । केपी ओलीलाई नै जस दिलाउनका लागि हो त ?
प्रकाशित: २०७८ भदौ २९ गते १९:२२
3 thoughts on “हाम्रो लागि कमल थापा र प्रचण्ड उस्तै हुन्ः धर्मेन्द्र वास्तोला”
Shova Raj Baral says:
विप्लव नेकपा लेखौँ, माओवादी होइन् ।
samaya sandharwik interview with talented person.
यो किन र कसरी भने धाहा भएन तर 54 पछिको संसदमा राप्रपा वा कमल थापा प्रवृति थियो जसरी हुन्छ सरकारमा जाने । ठीक अहिले प्रचण्ड त्यही ठाऊमा छन् । यो ठीक हो ।